सडक बन्द हुँदा तीन गाउँपालिकाका नागरिकको सम्पर्क टुट्यो
प्रकाशित मिति: 2017-07-17
सृष्टि सुनुवार,सोलु एफएम सोलुखुम्बु
सोलुखुम्बुको सल्लेरी–नेले सडक खण्ड फेरि बन्द भएको छ । सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका ६ दोर्पुबजारस्थित नवनिर्मित बसपार्क नजिकै सडकमा पर्ने बिजुलीको पोल जोगाउनको लागि पर्खाल लगाउनको क्रममा सडक अबरुद्ध भएको हो ।
बसपार्क नगरपालीकाको आन्तरीक कोषबाट लगानी गर्ने गरि निर्माण गरिएको सोलुदुधकुण्ड नगरपालीका वडा नम्बर ६ का वडा अध्यक्ष रामकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । सडक अबरुद्ध हुदा दुधकौशिका, सोताङ र महाकुलुङ गाउँपालीकाका नागरिक मारमा परेका छन् ।
निर्माणाधिन गार्मा जोर बौद्ध नेले, देउसा सडक खण्डमा समेत यातायात सञ्चालन हुन नसक्दा दैनिक उपभोग्य बस्तु लगाएत सम्पुर्ण यातायात ठप्प भएको छ । अहिले दैनिक उपभोग्य खाद्यान्न खच्चडमा ढुवानी भईरहेको छ । यात्रुहरुलाई हिडेर नै यात्रा गर्नु पर्ने वाध्यता रहेको छ ।
बाटाको अवस्था राम्रो नभएपछि र निमार्णको काम जारी रहेकाले गाडी चलाउन नसकिने सोलुखुम्बु यातायात व्यवसायी संघका उपेन्द्र श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ । सडक सुचारु हुन अझै एक साता लाग्ने देखिएको छ । यसैबीच यातायात व्यवस्था विभागले बिपी राजमार्गमा रातिको समयमा चल्ने भाडाका सवारीसाधन आवतजावतमा रोक लगाएको छ ।
वर्षाको समयमा रातीको यात्राले दुर्घटनाको जोखिम बढाउने भन्दै आज रातीदेखि नै यो सडक खण्डमा रात्रिकालीन समयमा चल्ने भाडाका सवारी आवतजावतमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो ।
सोना सिमेन्टसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न माग
​ हिलोसहितको पानी किन आयो ? के असर गर्छ ?
सीआईएनकर्मी चिमोरियासहित आठ पत्रकार पुरस्कृत
स्वयंसेविका हुन एसईई पास हुनुपर्ने
रातो रगतको कालो व्यापार (अडियो)
“बोल माया” अमूल्य कृति (अडियो सहित)
मुगुलाई ५५ औँ जिल्लाका रूपमा खुल्ला दिसामुक्त घोषणा
बाजुरामा सुत्केरी भैंसीका लागि सुरक्षाभत्ताको व्यवस्था